Melania Trump dia manaraka an'i DOJ amin'ny fanarahana ny sakaizany taloha - ny olona - TELES RELAY
Melania Trump dia manaraka ny DOJ amin'ny fanarahana ny sakaizany taloha - ny olona
Telo andro taorian'ny nametrahan'ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana amerikana fitoriana momba ilay sakaizan'i Melania Trump, Stephanie Winston Wolkoff, noho ny fanoratany tantara mahamenatra momba azy, dia nandefa fanafihana nampivadi-po ilay vehivavy voalohany, ary niampanga an'i Winston Wolkoff ho “mpanararaotra” izay naka tombony amin'ny "finiavana tsara" anaovany vola.
Melania Trump nisioka hoe fanambarana Zoma izay ezahany hampifanohitra ny hetsika nataony "Be Best" hanompoana ny vahoaka amerikanina sy hanampiana ny ankizy amin'ny hetsika "tsy marina" nataon'i Winston Wolkoff hampandroso ny "fandaharam-potoanany manokana."
Rehefa misafidy ny hifantoka amin'ny olona manompo tena sy ny resadresa-poana ny fampahalalam-baovao fa tsy ny asa hanampiana ny taranatsika manaraka, dia mila resahina izany: ⬇️ https://t.co/0VIv1DcG35
- Melania Trump (@FLOTUS) Oktobra 16, 2020
Ao amin'ny "Melania and Me: The Rise and Fall of my Friendship With the First Lady," Winston Wolkoff dia nilazalaza ny tenany ho confidante taloha an'ny vehivavy voalohany, nilaza fa nihaona izy ireo rehefa niasa tamin'ny magazine Vogue, nikarakara hetsika toy ny Met Gala, ary ilay-Melania Knauss tamin'izany dia ilay sakaizan'ny modely fanta-daza an'i Donald Trump.
Stephanie Winston Wolkoff, mpanolotsaina ny vehivavy voalohany, tao amin'ny Trump International Hotel any Washington, jan. 16, 2017 (Justin T. Gellerson / The New York Times)
Winston Wolkoff dia nanoratra fa tia tena ny vehivavy voalohany ary nihevitra ny tenany ho sarin'olona, ​​ary nampiseho azy ho manana fifandrafiana sy fifaninanana amin'ny zanany faravavy, Ivanka Trump, ary tsy voakasik'ireo fanehoan-kevitra mamoafady nataon'ny vadiny momba ny vehivavy sy ireo mpivadi-pinoana tamina kintana vetaveta ary Playboy Playmate.
Melania Trump dia nilaza ihany koa fa Winston Wolkoff “zara raha” nahalala azy, na dia nampiantso azy handamina hetsika ho an'ny fitokanana ny filoha Donald Trump tamin'ny 2017 sy hiasa an-tsitrapo ho azy ao amin'ny White House i Winston Wolkoff.
Ilay Melania Trump tsy miankina malaza dia toa natoky an'i Winston Wolkoff ampy ihany koa mba handatsaka baomba amin'ny resadresaka ataon'izy ireo ary hiresaka ampahibemaso momba ny fahasosorany. Nitaraina izy noho ny tsy maintsy haingoany ny Trano Fotsy amin'ny Krismasy sy ny fomba fitsikeran'ny olona ny fihetsiny noho ny politikam-pisarahan'ny vadiny. Winston Wolkoff dia nandrakitra an-tsokosoko ny resadresaka nataony tamin'ilay vehivavy voalohany, ary nanonona azy be dia be tao amin'ny bokiny. Izy koa dia nilalao ampahany tamin'ireo rakipeo tamin'ny resadresaka nifanaovana tato ho ato.
Mikasika ireo rakipeo dia nilaza i Melania Trump fa: "Vehivavy ity izay nandrakitra an-tsokosoko ny antso an-tariby an-telefaonantsika, namoaka ampahany tamiko izay tsy ao anaty toe-javatra intsony, avy eo nanoratra boky fifosana tsy niasa nanandrana nanodinkodina ny toetrako."
Melania Trump koa very fanantenana tamin'ny fomba nanambaran'ny haino aman-jery fanambarana be dia be momba ny fanambarana tao amin'ny bokin'i Winston Wolkoff raha mijery ny ezaka "Be Best" izy.
"Indray mandeha indray, ny famoahana zavatra hampifantoka ny fandrakofan'izy ireo amin'ny fitadiavako kely amin'ny asako tsara", hoy i Melania Trump. "Betsaka ny mpanararaotra manararaotra mijery ny tenany ihany, ary indrisy mitady hanandratra tena amin'ny alàlan'ny fahalalàm-pomba ny fanasoavako."
Tao amin'ny fitoriana azy, nilaza ny Departemantan'ny Fitsarana fa nanitsakitsaka ny fifanarahana tsy nambarany izay nosoniaviny i Winston Wolkoff rehefa nanaiky ny hanao an-tsitrapo hanampy ilay vehivavy voalohany ao amin'ny White House, hoy ny New York Times. Nilaza ny fitoriana fa noraran'ny NDA tsy hamoaka antsipirihany momba ny tsiambaratelo fantany nandritra ny fotoana niasany ho an'ny vehivavy voalohany.
Nilaza ny manam-pahaizana manokana momba ny lalàna fa niteraka fitarainana vaovao io fitoriana io raha mampiasa ny fahefan'ny Departemantan'ny Fitsarana i Trump mba handaminana isa ara-politika.
"Ity no hetsika farany nataon'ny fianakavian'i Trump hanandrana hamadika ny Departemantan'ny Fitsarana ho orinasan-dalàna tsy miankina aminy mba hampanginana ireo izay miteny mitsikera ny Trump," hoy ny mpisolovava ao Washington, Mark Zaid. ao amin'ny op-ed ho an'ny Washington Post.
"Azon'ny governemanta atao ny manenjika olona amin'ny famoahana vaovao voakilasy, saingy tsy mahasakana azy ireo tsy hamoaka boky izany satria mety hahatonga ny fianakavian'ny filoha ho ratsy tarehy fotsiny," hoy i Zaid nanampy.
"Ka izao i Bill Barr dia tsy mpisolovava an'i DONALD Trump fotsiny fa mpisolovava an'i MELANIA Trump koa izy?" Twitter mpandalina lalàna ary mpampanoa lalàna federaly teo aloha Glenn Kirschner. “Ary i Barr dia nanaparitaka ny DOJ hanohitra an'i Stephanie Wolkoff, sakaizan'i Melania taloha izay nanoratra boky hitantara? Manohy mandoto ny DOJ amin'ny fomba mahatsiravina i Barr. ”
Ny mpisolovava iray an'i Winston Wolkoff dia nilaza tamin'ny fanambarana fa ny fitoriana dia "tsy misy ilana azy" ary manitsakitsaka ny fanitsiana voalohany.
"Maneho ny ezaky ny Trumps ny fangatahana ny DOJ hanatratra tanjona manokana sy tombontsoa manokana," hoy ny mpisolovava Lorin L. Reisner.
Nanaiky ny manam-pahaizana fa ny zon'ny fanitsiana voalohany nataon'i Winston Wolkoff dia mety handresy ny fikatsahan'ny governemanta Trump valifaty, hoy ny New York Times.
Nanaiky ny manam-pahaizana iray hafa fa ny adihevitra DOJ dia mety hanosika ny fetran'ny tsiambaratelon'ny governemanta, satria i Winston Wolkoff dia tsy hanana fidirana amin'ny fampahalalana voasokajy, Heidi Kitrosser, mpampianatra lalàna ao amin'ny University of Minnesota Law School ary manam-pahaizana momba ny lalàm-panorenana sy ny tsiambaratelon'ny governemanta , hoy ny Times. Matetika ny tompon'andraikitra amin'ny fiarovam-pirenena dia manao sonia fifanarahana mba tsy hamoahana ireo fitaovana voasokajy.
Ny resadresaka tsy miankina nofaritan'i Winston Wolkoff tamin'i Melania Trump koa dia "nitovy tamin'ireo karazana kaonty izay natolotry ny mpanampy teo aloha tao amin'ny White House maro tao anaty fahatsiarovana," hoy ny Times nanampy.
Kitrosser koa dia nametra-panontaniana momba ny resaka fa ny resadresaka nataon'i Melania Trump tamin'i Winston Wolkoff dia voaro amin'ny tombontsoan'ny fahefana mpanatanteraka, ary nilaza fa ny tombontsoa manokana dia mamela ny tsiambaratelo eo amin'ny filoha sy ny mpanolotsainy, fa tsy ny vehivavy voalohany sy ny mpanampy azy, hoy i Kitrosser tamin'ny Times.
Mampametra-panontaniana ihany koa raha afaka manantena ny hampihatra ara-dalàna ny fifanarahana tsy fampahafantarana ireo mpiasam-panjakana ny filoha na ny vadiny, hoy ny tatitra. Amin'ny maha mpandrafitra trano sy kintan'ny fahitalavitra zava-misy azy dia matetika i Trump no nanao sonia fifanarahana tsy fanambaràna, fa na dia ny mpanolotsaina Trompotsy teo aloha Trump Donald McGahn aza dia nisalasala fa afaka ampiharina amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny White House izy ireo, na dia nisy aza ny tompon'andraikitra nanasonia azy ireo hanakanana an'i Trump, hoy ny Times.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany (tamin'ny teny anglisy) tao amin'ny https://www.mercurynews.com/2020/10/16/melania-trump-follows-doj-in-going- After-a-ex-friend-and-political -enemy /
Tsy mahazo vaksinin'ny coronavirus isika alohan'ny fifidianana - BGR